Azu nwanyi bu ihe eji eji akwa uwe, nke o kwesiri itinye ego. Ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị mmabibi, site na agba, mgbe ahụ ihe a ga-amasị gị ruo ogologo oge. Lezienụ anya na-egbukepụ egbukepụ egbukepụ egbukepụ, nke na-egbuke egbuke, nke na-acha ọbara ọbara.
Nwanyi eji akwa uwe - uwe
Ndị eji ejiji eme ihe dị mkpa, ha anaghị ahapụ ọnọdụ ha na oge a, kama nke ahụ, a na-anọchite anya ha na mkpokọta ọ bụla. Dịkwa ka mgbe niile, ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ihe na-enye ụmụ agbọghọ ahụ ụdị nhọrọ dị mma:
Ngwongwo na-acha uhie uhie nwere ike ịrụ ọrụ dị ebube - ọ na-ewepụpụta ọnụ ọgụgụ ahụ, na-eme ka ọ dị ntakịrị, ma, n'ezie, na-eji ntutu dị mma họrọ. Ugbu a, ihe a na-eme abụghị naanị sokwasị, kama ọ na-egosikwa uwe mmiri. Dabere na njirimara nke onyonyo gị, ị nwere ike ịhọrọ nke a ma ọ bụ ihe nlereanya ahụ ma mepụta foto dị ebube.
Ọ bụrụ na ị na-achọ uwe na-acha uhie uhie, ị nwere ike ịnwale uwe dịka uwe. Uwe akwa pensụl na jaket nwere obere ogwe aka ga-ele anya na ọ ga-adị mma n'ọdụ ụgbọ mmiri, ma ọ bụrụ na ha na-acha ọbara ọbara.
Egwuregwu egwuregwu na-acha uhie uhie bụ ihe na-atọ ụtọ. Ụdị dị otú a ga-ebuli ọnọdụ gị n'ụtụtụ, ọ ga-arụ ọrụ na ọfịs mba maka picnic.
Ejiri acha uhie uhie na-adabara n'ụzọ zuru oke dịka ejiji. Họrọ ihe nlereanya na akwa akwa 7/8 , na-emeghe nkpere ụkwụ, jiri jaket na-enweghị aka aka ma ọ bụ na obere uwe aka ma na-eyi ihe dị otú ahụ kwa ụbọchị, na-enwe mmetụta kachasị mma ma mara mma. Ọfọn a nke a ga-ele anya na jaket "gabiga ókè."
Kedu ihe ị ga-eyi uwe na-acha ọbara ọbara?
E kwesịrị ijikọta uwe ejiji uhie na ihe ndị ọzọ nke ọma, ka ị ghara ịtụfe ihe oyiyi ahụ:
Mbụ, naanị ị nwere ike itinye ya n'okwasị gị, na-ekpuchi olu gị na collarbones - yabasị ga-eme ka ọ bụrụ laconic, ma sexy;
a na-ejikwa uwe elu na-acha uhie uhie na-acha na-acha uhie uhie na-acha ọcha ma ọ bụ akwa, Oxford akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ studs;
na-eme ka ụda mgbede, mesie nsọpụrụ nke ejiji na ime elu, ma gosipụta otu ihe - anya ma ọ bụ egbugbere ọnụ, buru ihe a tụrụ mma, tinye akwa akpụkpọ ụkwụ, na voila - ị dị njikere imeri ụwa.
Agba aja acha na-acha ọcha, nwa, ọlaedo, ọ na-adịkwu jụụ na isi awọ, agba aja aja - tụlee nke a mgbe ị na-eke onyinyo gị.
Ụmụ nwanyị corsets
N'elu elu na ogwe aka
Uwe mkpu akwa si na pox fox - ihe eji yie na otu esi eche maka akwa Arctic?
Uwe uwe mgbede
Uwe na ala maka imecha
Nduku na-esi na 1 hectare
Onye zuru okè - onye bụ nke a na otu esi emeso izu okè?
Ego ole ka ị ga-aga Saịprọs?
Ekike ndị inyom mara mma
Osisi Dollar - odo odo
Kedu otu ị ga esi ahọrọ sneakers ụmụ nwanyị maka ahụike?
Ebe a na-eme nnyocha bụ Mirador de Selkirk
Gary Oldman nwere ike ịdapu agbụrụ Oscar - niile n'ihi oke iwe nwunye ya!
Oke oyibo bu nri dika fatịlaịza
Kedu ihe ị ga-eyi odo odo?
Kedu esi jikọọ ndị ọkà okwu?
Ọrịa egbugbere ọnụ - mgbaàmà, ihe ịrịba ama mbụ
Mmega ahụ na mgbatị ahụ maka ọnwụ
Egwuregwu Azụ Ubi
Na-echekwa dahlias na oyi